Letcho ekhaya kuyinto esihlwabusayo elimnandi ebusika preform, angasetshenziswa futhi njengendlela isaladi efana isidlo okubabayo. Kufanele kuqashelwe ukuthi ukulungiswa ezahlukeneyo enjalo Canned Ukudla kukhona ezihlukahlukene. Nokho, ngezansi sethula iresiphi esekelwe utamatisi nopelepele oluhlaza.
Lecho ekhaya: izithako ezifanele
Bulgarian pepper green umbala - amakhilogremu amabili;
Carrot big - anamakhulu mahlanu amagremu;
utamatisi elibomvu sesivuthiwe - amakhilogremu amathathu;
ama usayizi esikhulu - bobathathu (uma ungathandi lokhu isithako kuyinto lecho ongakwenza ngaphandle kwalo);
amafutha sunflower - nezinkezo ezinhlanu noma eziyisithupha ezinkulu;
ushukela - ngayikhulu namashumi ayisihlanu amagremu;
usawoti iodized - nezinkezo ezimbili ezinkulu (nge-slide);
apula uviniga devyatiprotsentny - nezinkezo ezimbili ezinkulu;
emnyama futhi yimuphi omunye izinongo - at uyazikhethela.
Lecho ekhaya: ukulungiselela imifino for ukulondolozwa okwengeziwe
ngamakhilogremu amathathu utamatisi ezivuthiwe obomvu, upelepele oluhlaza, ezinkulu usayizi ama izaqathe fresh kufanele wageza kahle amanzi ashisayo futhi, uma kunesidingo, bawakhulule isikhumba umoba. Ngemva kwalokho, utamatisi kudingeka gaya grinder noma blender, bese uwafake koqweqwe lwawo umcengezi ezinkulu. Okulandelayo, udinga nquma ku ezine noma eziyisithupha tincetu pepper, grate izaqathe ngokusebenzisa grater esikhulu, futhi anyanisi oqoshiwe zibe izindandatho uhhafu.
Indlela ukupheka lecho: ukwelashwa ukushisa
Uma zonke izithako bahlanza futhi imibengo, kufanele ngokushesha ngiqale ukwelashwa kwabo ukushisa. Utamatisi uginindela wobulawa emlilweni ophansi i umcengezi koqweqwe lwawo. Uma ochotshoziwe utamatisi thumba, bafuna ukwengeza izaqathe fresh ogayiwe kanye thumba cishe imizuzu emihlanu kuya kweziyisikhombisa. Eceleni imifino ezisekelwe kufanele uthele onion bell pepper. Kunconywa ukuba nithele imizuzu mayelana nanhlanu, bese kukho ngayikhulu namashumi ayisihlanu amagremu ushukela, nezinkezo ezimbili ezinkulu kasawoti iodized, zonke izinongo ukunambitha kanye namamililitha ayisihlanu amafutha sunflower.
Lecho ekhaya: esigabeni sokugcina ekulungiseleleni
Uma zonke izithako zibekwe i isitsha koqweqwe lwawo, isaladi Kunconywa ukuba nithele amaminithi ambalwa bese engeza wezipuni ezimbili ezinkulu apple cider uviniga devyatiprotsentnogo uhlanganise ngokucophelela.
Salad lecho: ukulondolozwa inqubo
Kokuqendwa isidlo enongiwe kufanele ibe ukusabalala egcwele izimbiza ezincane lapho kudinga oyi-inzalo phezu umusi noma esebenzisa amanzi abilayo. Ngemva kwalokho, kufanele izitsha igcwaliswe ikhava roll, ibheke phansi futhi uvalwe bopha ingubo noma ezinye izingubo ezifudumele. Kuyaphawuleka ikakhulukazi ukuthi kule ndlela ukumelana lecho efudumele Kunconywa mayelana elilodwa noma amabili izinsuku. Khona-ke Canned katamatisi nopelepele kufanele ibekwe endaweni epholile emnyama (sela, sela, efrijini kanye nokunye okufana nalokho. D.). Ikhaya lecho kuyinto efiselekayo ukusebenzisa nezinye izinjongo kuphela ngemva kwezinyanga ezimbili noma ezintathu.
Kungenzeka yini ukubeka i isitsha koqweqwe lwawo kuhhavini? Khuluma iqiniso lonke we abaqambi